दुईवटा रेल जुधेर भएको दुर्घटनामा ३० जना यात्रुको मृत्यु भएपछि आयो यस्तो आदेश ! | suryakhabar.com
Home अन्तर्राष्ट्रिय दुईवटा रेल जुधेर भएको दुर्घटनामा ३० जना यात्रुको मृत्यु भएपछि आयो यस्तो आदेश !
on: ५ कार्तिक २०७५, सोमबार १२:०६ In: अन्तर्राष्ट्रियTags: No Comments
यिलान, ताइवान । ताइवानका राष्ट्रपति चाइ इङ–वेनले आइतबार भएको रेल दुर्घटनाको बारेमा तत्काल छानबिन गर्न आदेश दिएका छन् । ताइवानमा विगत २७ वर्षकै सबैभन्दा भयानक मानिएको उक्त रेल दुर्घटनामा १८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
उक्त क्षेत्रमा रेलसेवा आंशिक रुपमा शुरु भएको छ । ताइवानका राष्ट्रपतिले सोमबार बिहानै दुर्घटनास्थलको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।
उनले दुर्घटनाको कारण तत्काल पत्ता लगाउन आदेश दिइएको संवाददाताहरुलाई बताए ।
यात्रुहरुले रेल दुर्घटना हुनुअघि जोडले हल्लिएको र तीव्र गतिमा रहेको बताएका छन् । “रेल दुईपटक रोकिएको थियो र त्यसैबेला हामीले रेलमा केही समस्या भएकाले मर्मत आवश्यक छ भनेर जानकारी दिएका थियौं,” एक जना यात्रु चिउले बताए ।
“हामीले रेलको गति अति बढी रहेको अनुभव गरेका थियौं, त्यसपछि ठूलो आवाज आयो र हामी आफ्ना सिटबाट उडेका थियौं,” उनले भने । उनले त्यसबखत धेरै यात्रु सुतिरहेका थिए ।
यो रेल दुर्घटना सन् १९९१ यताकै सबैभन्दा डरलाग्दो हो । त्यसबखत पश्चिमी ताइवानको मियाओलीमा दुईवटा रेल जुधेर भएको दुर्घटनामा ३० जना यात्रुको मृत्यु हुनुका साथै एकसय १२ जना घाइते भएका थिए । –एजेन्सी